Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Singapore sy India dia nanao fifanarahana vaovao momba ny sidina
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • fanorenana • Vaovao Mafana Singaporeana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ireo sidina ara-barotra dia hitohy amin'ny lalan'ny dia vita vaksiny amin'ny 29 Novambra
Sidina New Singapore India
Raha naneho hevitra momba ny tolo-kevitra hamerenana ny sidina eo anelanelan'i India sy Singapour manomboka ny 29 Novambra eo ambanin'ny Vaccinated Travel Lane (VTL), Jyoti Mayal, Filoha, Travel Agents Association of India (TAAI), dia nanolotra ny firariantsoa sy fankasitrahana feno ho an'ny Civil Aviation Authority of Singapore. (CAAS) sy ny Minisiteran'ny Sivily Sivily ao India momba ny famerenana ny sidina ara-barotra voalahatra eo amin'ny firenena roa tonta.
Ny VTL any Singapore miaraka amin'i India dia hanomboka amin'ny sidina enina voatondro isan'andro avy any Chennai, Delhi ary Mumbai. Hanomboka ny 29 Novambra ho avy izao ny fangatahana fahazoan-dàlana vita vaksiny ho an'ireo tompon'ny pasipaoro fohy sy maharitra avy any India. fotoanan'ny fihanaky ny covid dia fihetsika feno fahasahiana tokoa izay tsy hanamafisana ny fifandraisana eo amin’ny firenena roa tonta fa hiasa ho famelomana ny sehatry ny fizahantany ihany koa. Tena tsapako fa ilaina ny sidina ara-barotra bebe kokoa mba hamelomana indray ny fidirana fizahan-tany mankany India”, hoy ihany izy.
Ny zotram-piaramanidina dia afaka miasa ihany koa amin'ny sidina tsy VTL eo amin'ny firenena roa tonta, na dia iharan'ny fepetra ara-pahasalamana manjaka aza ny mpandeha amin'ny sidina tsy VTL. “Niara-nidinika tsy tapaka tamin'ny Minisiteran'ny Sidina sivily, Governemanta India izahay tao amin'ny TAAI. Ny fisokafan'ny lanitra ho an'ny zotram-pitaterana ara-barotra iraisam-pirenena izay manasongadina ny ahiahinay momba ny fanamorana ny fandraharahana”, hoy ny fanehoan-kevitry Jay Bhatia, filoha lefitry ny TAAI.
Nanao ezaka tsara ny TAAI Southern Region miaraka amin'ny Singapore Tourism Board (STB) nikarakara webinar fitsangatsanganana tany am-piandohan'ity taona ity tamin'ny volana Jolay izay nahitana fandraisana anjara betsaka. “Ny fanapahan-kevitra mamokatra toy izany dia raisin'ny sehatry ny fizahantany sy ny fikambanan'ny fitsangatsanganana satria ny ampahany tsara amin'ny toekarena dia miankina amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany. Ny toe-karena na aiza na aiza dia mila fifohazana tsara indrindra taorian'ny trauma Covid, ”hoy i Bettaiah Lokesh, Sekretera jeneralin'ny TAAI.
"Ny mpiasan'ny fitsangatsanganana dia mbola ekena ho vahaolana tokana ho an'ny mpanjifa, mitarika sy mitantana amin'ny fomba matihanina ny lafiny rehetra amin'ny fitsangatsanganana an-trano sy / na iraisam-pirenena izay ahitana ny fanarahana ny fepetra takian'ny Covid amin'ny fiaingana sy fahatongavana amin'ny toerana haleha," hoy i Shreeram Patel, Hon Treasurer, TAAI sady naneho fisaorana ho an'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny firenena roa tonta.